1 Tantara 25 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Tantara 25:1-31
25 Ary natokan’i Davida sy ny lehiben’ny+ antoko-mpanompo+ mba hanao fanompoana ny sasany tamin’ny taranak’i Asafa sy Hemana+ ary Jedotona,+ izay naminany niaraka tamin’ny harpa+ sy ny lokanga+ ary ny kipantsona.+ Ary ireo taranaka natokana ireo no voatendry hanao fanompoana. 2 Ireto no avy amin’ny taranak’i Asafa: I Zakora, Josefa,+ Netania, ary Asarela.+ Zanak’i Asafa ireo, ary teo ambany fiadidian’i Asafa,+ izay naminany teo ambany fifehezan’ny mpanjaka. 3 Ary ny avy amin’i Jedotona+ dia i Gedalia,+ Zery,+ Jesaia,+ Simey, Hasabia ary Matitia.+ Zanak’i Jedotona izy enina ireo, sady teo ambany fiadidian’i Jedotona rainy, izay naminany niaraka tamin’ny harpa mba hisaorana sy hiderana an’i Jehovah.+ 4 Ary ny avy amin’i Hemana+ dia i Bokia,+ Matania,+ Oziela,+ Seboela, Jerimota, Hanania,+ Hanany, Eliata,+ Gidalty,+ Romamti-ezera,+ Josbekasa,+ Maloty,+ Hotira,+ ary Mahaziota. Zanak’i Hemana ireo. 5 Ireo rehetra ireo no zanakalahin’i Hemana. Mpahita fahitana+ ho an’ny mpanjaka i Hemana, sady mpanambara ny tenin’Andriamanitra taminy. Nitsoka ny anjombony* hiderana an’Andriamanitra i Hemana. Dia nomen’Andriamanitra zanakalahy efatra ambin’ny folo sy zanakavavy telo izy.+ 6 Samy notarihin’ny rainy izy rehetra ireo, rehefa nihira tao an-tranon’i Jehovah niaraka tamin’ny kipantsona+ sy ny lokanga+ ary ny harpa,+ mba hanaovana ny fanompoana ao an-tranon’Andriamanitra. Ary teo ambany fifehezan’ny mpanjaka i Asafa sy Jedotona ary Hemana.+ 7 Ary valo amby valopolo sy roanjato ny isan’izy ireo mbamin’ny rahalahiny, izay nampianarina hihira ho an’i Jehovah,+ ka efa tena mahay+ izy rehetra. 8 Koa nanao antsapaka+ izy ireo ny amin’izay tokony hiandraiketany avy, ary nitovy ihany no nitondrana ny kely sy ny lehibe,+ mbamin’ny efa tena mahay+ sy ny vao mianatra. 9 Rehefa natao ny antsapaka dia azon’i Josefa+ avy amin’ny taranak’i Asafa ny voalohany; an’i Gedalia+ ny faharoa—roa ambin’ny folo izy sy ny rahalahiny ary ny zanany lahy—; 10 ny fahatelo dia an’i Zakora+ sy ny zanany lahy sy ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 11 ny fahefatra dia an’i Jizry+ sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 12 ny fahadimy dia an’i Netania+ sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 13 ny fahenina dia an’i Bokia sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 14 ny fahafito dia an’i Jesarela+ sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 15 ny fahavalo dia an’i Jesaia sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 16 ny fahasivy dia an’i Matania sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 17 ny fahafolo dia an’i Simey sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 18 ny fahiraika ambin’ny folo dia an’i Azarela+ sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 19 ny faharoa ambin’ny folo dia an’i Hasabia sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 20 ny fahatelo ambin’ny folo dia an’i Sobaela+ sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 21 ny fahefatra ambin’ny folo dia an’i Matitia sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 22 ny fahadimy ambin’ny folo dia an’i Jeremota sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 23 ny fahenina ambin’ny folo dia an’i Hanania sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 24 ny fahafito ambin’ny folo dia an’i Josbekasa sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 25 ny fahavalo ambin’ny folo dia an’i Hanany sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 26 ny fahasivy ambin’ny folo dia an’i Maloty sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 27 ny faharoapolo dia an’i Eliata sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 28 ny fahiraika amby roapolo dia an’i Hotira sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 29 ny faharoa amby roapolo dia an’i Gidalty sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 30 ny fahatelo amby roapolo dia an’i Mahaziota+ sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo; 31 ny fahefatra amby roapolo dia an’i Romamti-ezera+ sy ny zanany lahy ary ny rahalahiny: roa ambin’ny folo.
^ A.b.t.: “nanandratra ny tandrony.”